अन्तर्वार्ता Archives » Nepal Ireland News
हरिबोल भण्डारी लाई चिनाउन अलि बडी नै भूमिका बाधनु पर्ने हुन्छ किनकी उनि लोकप्रिय समाजसेवी, सफल व्यवसायी र राजनीति बुझेका खेलाडी हुन् । काठमाडौँ जोरपाटी नारायणटार मा जन्मे हुर्केका हरिबोल केटाकेटी देखि...
केशरबहादुर बिष्ट, सहअध्यक्ष राप्रपा नेपाल राप्रपा नेपालको तपाई दोस्रो नेता तथा सहअध्यक्ष तर किन केन्द्रीय समितिको बैठकमा जानु भएन ? दुर्भाग्यवस मलाइ केन्द्रीय समितिको बैठक बारे थाहा छैन र कसैले पनि सुचना पनि गरेको छैन । मैले...
नेपाली राजनीतिमा धर्य गरेर टिक्ने युवा नेताहरु कमै छन् ति मध्ये एक जना सबैले चिनेको र सबै बीच लोकप्रिय नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी फेरी केन्द्रिय सदस्य पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ. नेपाली...
कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई ५२६ मतको अन्तरले हराउँदै देउवा सभापति बनेका हुन् । सोमबार राति सकिएको मतगणना परिणामअनुसार देउवाले १८२२ मत प्राप्त गरे...
नेपाली कांग्रेसको शीर्ष तह पछिल्लो पटक सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडल (सुशेरा) ले धानेका थिए। सुशीलको निधनपछि अब कांग्रेस नेतृत्व शेरबहादुर र रामचन्द्र (शेरा) मा खुम्चनु स्वाभाविकै हो। यतिबेला कांग्रेस महाधिवेशनको तीव्र...
कमल थापा, उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नेपाल–भारत नाकामा अहिले आपूर्ति व्यवस्था केही सहज भएको देखिएको छ। यो नेपालको कूटनीतिक प्रयासले भएको हो? भारतसँग जुन तिक्तता तथा असमझदारी थियो, त्यो करिब डेढ महिनाअगाडि नै करिब–करिब अन्त्य भइसकेको अवस्था...
दीपकराज जोशी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपालमा माथिल्लो निकायमा पुग्न सत्तानिकट दलको कार्यकर्ता हुनुपर्छ वा क्षेत्रीय तथा जातीय सन्तुलन मिलेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तपाईं यसविपरीत देखिनुभयो, कसरी ? खासमा त्यो बाहिर देखिने कुरा...
० अहिले देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? – मुलुक असामान्य स्थितिमा छ । सिंगै राष्ट्रले केही अप्ठेराहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ । यो परिस्थितिमा नियमित अवस्थामा जस्तै परिणामको...